Abavelisi kunye factory - China products abavelisi
Indawo yokubamba umlilo
I-valve yokumisa i-din ene-stor ...
4 indlela engenayo ebetha kamnandi
Umbhobho womlilo ovuthayo
I-valve yokufika ye-TCVN
Inkcazo: I-valve yokufika ye-TCV yivelufa yeedigri ezingama-45 ezenziwe ngokwemigangatho ye-TCVN. Zombini ubungakanani bokungena kunye nobungakanani bepla yimisonto ye-BSP. Ubungakanani obuphambili zii-50mm, 65mm, njl. I-valve yomzimba kunye nezinto ezenziwayo zenziwe ngobhedu, nto leyo ephucula uxinzelelo lweemveliso. I-valve yokufika ye-TCVN yinxalenye yenkqubo yokulwa umlilo, kwaye umsebenzi wayo kukubonelela ngomthombo wamanzi wokulwa umlilo. Uxinzelelo lokusebenza kombane wokucima umlilo uhlala ngaphakathi kwi-16bar, kwaye ...
Inkcazo: Ii-breeching Inlets zifakwe ngaphandle kwesakhiwo okanye nayiphi na indawo efikeleleka lula kwisakhiwo ngeenjongo zokucima umlilo ngabasebenzi beqela labacimi mlilo ukufikelela kwindawo engenayo. Iindawo zokungena ngaphakathi zifakelwe unxibelelwano lokungena kwinqanaba labacimi mlilo kunye nonxibelelwano lwendawo kwiindawo ezichaziweyo. Ihlala yomile kodwa iyakwazi ukuhlawuliswa ngamanzi ngokumpompa kwizixhobo zomlilo. Xa umlilo usenzeka, impompo yamanzi yetraki yomlilo inokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo ...
I-valve yokumisa i-din ene-storz iadaptha enekepusi
Inkcazo: I-DIN fire hydrant yivalve engama-45 eyenziweyo ngokwemigangatho yaseJamani. Zombini ubungakanani bokungena kunye nobungakanani bepla yimisonto ye-BSP. Ubungakanani obuphambili ngama-25mm, 40mm, 50mm, 65mm, njl. I-DIN fire hydrant yinxalenye yenkqubo yokulwa nomlilo, kwaye umsebenzi wayo kukubonelela ngomthombo wamanzi wokulwa umlilo. Uxinzelelo lokusebenza kombane wokucima umlilo uhlala ngaphakathi ...
Uxinzelelo ukunciphisa ivalve uhlobo
Inkcazo: Uhlobo lwe-E lokunciphisa uxinzelelo lwevalve luhlobo loxinzelelo olulawula i-valve yamanzi. Ezi zivalo zifumaneka nge-in-flanged inlet okanye kwi-screwed inlet kwaye zenziwe ukuba zithobele i-BS 5041 kwiCandelo le-1 eliqhelekileyo kunye nokunxibelelana kwethumbu lokuhambisa kunye ne-cap engenanto ehambelana ne-BS 336: 2010 esemgangathweni. Ivaluva zokumisa zihlelwa phantsi koxinzelelo oluphantsi kwaye zikulungele ukusetyenziswa kuxinzelelo lwegama elingentla ukuya kuthi ga kwimivalo engama-20. Ukugqitywa kwangaphakathi kwivalve nganye kukumgangatho ophezulu kuqinisekisa ukuhamba okuncinci ...
Indlela ye-2 yokungena komoya
Inkcazo: Ii-breeching Inlets zifakwe ngaphandle kwesakhiwo okanye nayiphi na indawo efikeleleka lula kwisakhiwo ngeenjongo zokucima umlilo ngabasebenzi beqela labacimi mlilo ukufikelela kwindawo engenayo. Iindawo zokungena ngaphakathi zifakelwe unxibelelwano lokungena kwinqanaba labacimi mlilo kunye nonxibelelwano lwendawo kwiindawo ezichaziweyo. Ihlala yomile kodwa iyakwazi ukuhlawuliswa ngamanzi ngokumpompa kwizixhobo zomlilo. Iinkcukacha eziphambili: ● Izinto eziphathekayo: Isinyithi yentsimbi / i-Dutile iron ● Inlet: 2.5 "BS ngokukhawuleza ...
2 indlela yokucima umlilo
Inkcazo: 2 Way Fire (Pillar) Hydrants are Wet-barrel fire hydrants for use in the water-service service kwiindawo zangaphandle apho imozulu iphakathi kwaye amaqondo obushushu engumkhenkce engenzeki. Umbhobho wamanzi omanzi unendawo enye okanye ngaphezulu ezivaliweyo ngaphezulu komgca womhlaba kwaye, phantsi kweemeko zokusebenza okuqhelekileyo, ingaphakathi lonke lombhobho wokucoca amanzi liphantsi koxinzelelo lwamanzi ngalo lonke ixesha. Iinkcukacha eziphambili: ● Izinto: Isinyithi esilahliweyo / i-Dutile iron ● Inlet: 4 "BS 4504/4" table E / 4 ”ANSI 150 # ● Outlet: 2.5" femal ...
Ivalve ye-engile yasekunene
Inkcazo: Iivalvu zangasekunene zaselwandle zihlobo lweepateni zevalve zamanzi. Ezi zivalo zohlobo zifumaneka nge-in-flanged inlet okanye kwi-screwed inlet kwaye zenziwe ukuthobela umgangatho waselwandle. Ii-valves ze-engile zihlelwa phantsi koxinzelelo oluphantsi kwaye zikulungele ukusetyenziswa koxinzelelo lwe-inlet ngegama ukuya kuthi ga kwi-16 bar. Ukugqitywa kwangaphakathi kwivali nganye yevalve kukumgangatho ophezulu kuqinisekisa ukuthintelwa kokuhamba okuphantsi okuhlangabezana neemfuno zovavanyo lokuhamba kwamanzi oluqhelekileyo.
Ingelosi yasekunene ivalve
Inkcazo: I-Angle Landing Valve luhlobo lwevalve yevalve hydrant. Ezi valves zokumisa uhlobo lwe-engile ziyafumaneka ngokuphuma kwamadoda okanye ukuphuma kwamabhinqa kwaye zenziwe ukuthobela umgangatho we-FM &ULIvalve zokumisa i-Angle zihlelwa phantsi koxinzelelo oluphantsi kwaye zikulungele ukusetyenziswa kuxinzelelo lwe-inlet ngegama ukuya kuthi ga kwimivalo eli-16. Ukugqitywa kwangaphakathi kwivali nganye yevalve kukumgangatho ophezulu kuqinisekisa ukuthintelwa kokuhamba okuphantsi okuhlangabezana neemfuno zovavanyo lokuhamba kwamanzi oluqhelekileyo ...
I-Screw landing valve
Inkcazo: I-Valve Landing Valve luhlobo lwevalve yevalve hydrant. Ezi zivalo zokumisa uhlobo ze-oblique ziyafumaneka nge-flanged inlet okanye kwi-screwed inlet kwaye zenziwe ukuthobela i-BS 5041 Icandelo 1 eliqhelekileyo ngokudityaniswa kwethumbu lokuhambisa kunye nekepusi engenanto ethobela i-BS 336: 2010 esemgangathweni. Ivaluva zokumisa zihlelwa phantsi koxinzelelo oluphantsi kwaye zilungele ukusetyenziswa kuxinzelelo lwe-inlet yokungena ukuya kuthi ga kwi-15 bar. Ukugqitywa kokufakwa kwangaphakathi kwivelufa nganye kukumgangatho ophezulu kuqinisekiswa ...
Flange ifika valve
Inkcazo: I-Flange Landing Valve luhlobo lwevalve ye-hydrant valve. Ezi zivalo zokumisa uhlobo ze-oblique ziyafumaneka nge-flanged inlet okanye kwi-screwed inlet kwaye zenziwe ukuthobela i-BS 5041 Icandelo 1 eliqhelekileyo ngokudityaniswa kwethumbu lokuhambisa kunye nekepusi engenanto ethobela i-BS 336: 2010 esemgangathweni. Ivaluva zokumisa zihlelwa phantsi koxinzelelo oluphantsi kwaye zilungele ukusetyenziswa kuxinzelelo lwe-inlet yokungena ukuya kuthi ga kwi-15 bar. Ukugqitywa kwangaphakathi kwento nganye kwivali yomgangatho ophezulu kuqinisekiswa okuphantsi ...
Uxinzelelo esisangqa ukunciphisa vana
Inkcazo: Uhlobo lweFlange lokunciphisa uxinzelelo lwevalve luhlobo loxinzelelo olulawula i-valve yamanzi. Ezi zivalo zifumaneka nge-in-flanged inlet okanye kwi-screwed inlet kwaye zenziwe ukuba zithobele i-BS 5041 kwiCandelo le-1 eliqhelekileyo kunye nokunxibelelana kwethumbu lokuhambisa kunye ne-cap engenanto ehambelana ne-BS 336: 2010 esemgangathweni. Ivaluva zokumisa zihlelwa phantsi koxinzelelo oluphezulu kwaye zilungele ukusetyenziswa kuxinzelelo lwe-inlet yokungena ukuya kwi-20 bar. Ukugqitywa kwangaphakathi kwento nganye kwivali yomgangatho ophezulu kuqinisekiswa okuphantsi ...